Beeraleeyda Qaadka ee Kenya oo ku hanjabay inay Soomaaliya ka joojiyanayaan Qaadka – Janaay Media
07:59: PM Wednesday August 21, 2019
Beeraleeyda Qaadka ee Kenya oo ku hanjabay inay Soomaaliya ka joojiyanayaan Qaadka
Posted on February 18, 2019 at February 18, 2019 by Abdikadar Hassan
Ganacsatada Qaadka ee Kenya ayaa ku hanjabay inay joojinayaan Qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya, haddii uu sii xumaado xiriirka u dhexeeya labada dal.
Afhayeenka Ganacsatada Qaadka ee dalka Kenya Kimathi Munjuri ayaa sheegay inay joojin doonaan Qaadka ay keenaan Soomaaliya, isagoo xusay in mar walba Soomaaliya ku hanjabto joojinta Qaadka, balse ay iyaga ka dhabeynayaan.
“Ma u dulqaadan doono in mar walba Soomaaliya noogu hanjabto joojinta Qaadka, anaga ayaa ka dhabeyn doono, marnaba Qaad kuma iibsan doono madax banaanida dalkeena”ayuu yiri Afhayeenka Ganacsatada Qaadka ee dalka Kenya.
Dowladda Kenya ayaa dhaqaale fara badan ka sameysa Qaadka ay u soo dhoofiso Soomaaliya, waxaa la sheegay in bishii ay ka soo gasho boqol milyan lacagta Kenya.
Xiriirka Diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku shareeray, markii dowladda Kenya ay u yeeratay Safiirkeedii u fadhiyay Muqdisho, kana dalbatay Safiirka Soomaaliya inuu dalkiisa dib ugu laabto.
khilaafka kenya iyo soomaaliya
Shir magaalada Muqdisho uga furmay Saraakiisha AMISOM
Posted by Abdikadar Hassan - February 12, 2019 0
Taliyeyaasha howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir soconaya 4 cisho, kaasoo looga hadlayo qorshaha ka…
Ciidamada Ammaanka ayaa gacanta ku dhigay nin ku labisna dharka dumarka
Posted by Abdikadar Hassan - March 11, 2019 0
Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa xalay gacanta ku dhigay nin soo xirtay dharka Dumarka, kaasoo ku sugnaa nawaaxiga Iskuulka Godeey ee…
Ciidamadda Dowladda oo Sheegay in Shabaab kala Wareegeen Deegaano
Posted by Abdikadar Hassan - March 26, 2019 0
Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka sameeyay deegaano ka Tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya. Deeganada ay…
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku riday Sarkaal NISA ka tirsana
Posted by Abdikadar Hassan - January 19, 2019 0
Maanta oo Sabti ah ayeey Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida xukun dil ah ku riday hal Xidigle Maxamed Cabdiraxmaan Cali oo…
AMISOM oo daboolka ka qaaday tirada ay gaarayaan ciidamada Xoogga dalka
Hawlgalka midowga afrika ee Amisom ayaa sheegay in ciidamad dowlada soomaaliya ay waqti xaadirkan u diyaarsan yihiin lawareegitaanka guud ahaan…